Daniel S. McCOY, CAS ။ အသံထုတ်ကုန်များ ၆၆၄ ထုတ်လုပ်မှုရောနှောမှုကိုဖွင့်သည်။ NAB သတင်းများ | 664 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Daniel S. McCOY, CAS ။ အသံထုတ်ကုန်များ ၆၆၄ ထုတ်လုပ်မှုရောနှောမှုကိုဖွင့်သည်
Los Angeles,, CA, ဇန်နဝါရီ 27, 2015 - ToneMesa, Inc, တွင်အခြေစိုက်နေတဲ့တည်နေရာနဲ့ Post-ထုတ်လုပ်မှုအသံကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်နှင့်အော်ပရေတာအဖြစ် Los Angeles မြို့, ရောနှောဒံယလေကအက်စ် McCoy, CAS ။ , သူ့ client များ '' စီမံကိန်းများအတွက်ထူးခြားတဲ့သံကိုဖမ်းယူ၏အရေးပါမှုကိုနားလည်သည်။ ဒီအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာသူတစ်ဦးအကွာအဝေးအပေါ်မှီခိုအားထားလာခဲ့ပါသည် အသံဖုန်းများအတွက် အဆိုပါအပါအဝင်ထုတ်ကုန်, 664 ထုတ်လုပ်မှုရောနှော, သူ့အသံထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သည်။
McCoy အများအပြားဖန်ဆင်းတော်မူပြီ အသံဖုန်းများအတွက် အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ကြရာကသူ့နဲ့သူ့အသင်းများကို '' သံကိုတူးစင်အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအဓိက အား NBC'' s ကို Ellen ဖြစ်သည်ဟုသမ္မတကတော်ပြရန်, အေဘီစီအဖြစ်မှန်ပြပွဲ ကြယ်နှင့်အတူကခုန် နှင့် Rising စတား, နှင့် Syfy ရဲ့အပေါ် ဂျင်မ် Henson ရဲ့သတ္တဝါဆိုင်စိန်ခေါ်မှုအနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, McCoy Ellen ဖြစ်သည်ဟုသမ္မတကတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကေဘယ်လ်ကြိုးရှိုးအသံဖမ်းအသံနှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်, Ellen ရဲ့ဒီဇိုင်းစိန်ခေါ်မှုဇန်နဝါရီလ 26, 2015 အပေါ်ပြသဖို့ရာ HGTV, ပေါ်မှာ။
"သင်ကဲ့သို့သောပြပွဲလုပ်ဖို့ကိုခေါ်ရမလို Ellen ရဲ့ဒီဇိုင်းစိန်ခေါ်မှု အရမ်းမကြာခဏဘယ်မှာသင်တစ်ဦးကြီးတွေ-name ကိုအနုပညာရှင်ရှိသည်နှင့်မယ့်လေးပတ်အတွင်းရှိုးထုတ်ခေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီတော်တော်လေးမော်ကွန်းအလုပ်ပဲ "ဟု McCoy ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာပရိဘောဂဆောက်လုပ်ရေးတွေအများကြီးတပ်ဆင်ထားကြောင်းပြသသည် ဖြစ်. , ငါကနေမျှော်လင့်လာကြပြီအဖြစ် အသံဖုန်းများအတွက်သူတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်တကယ်ကောင်းကောင်းတက်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ကျွန်မအထူးသဤစီမံကိန်းများအတွက် 664 အသုံးပြုသွားမည်နှင့်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်အစုံနှင့်အတူတကယ်သဘောကျခဲ့ပါတယ်။ "
McCoy အစဉ်အလာဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထုတ်လုပ်မှု console ကိုအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်အဘို့ဖြစ်ပါတယ် Ellen ရဲ့ဒီဇိုင်းစိန်ခေါ်မှုသူဟာ၏ကျယ်ပြန့် routing ကိုစွမ်းရည်အလုပ် အသံဖုန်းများအတွက် 664 အစား။ "ဒါဟာတကယ်ကိုကျွန်မသိပ် routing ကိုလုပျနိုငျသောငါ၏စိတ်ကိုမှုတ်များနှင့် output ကို / input ကိုများနှင့်အဆင့်အထိကိရိယာထိုကဲ့သို့သောကျစ်လစ်သိပ်သည်းအပိုင်းအစအပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအလွန်တစ် 50 ပေါင်ဘုတ်အဖွဲ့န်းကျင်လှည်းဖို့ရှိသည်မဟုတ်မှလွတ်မြောက်စေဖို့ခဲ့သည်။ ရှိသမျှတို့ကိုငါတဦးတည်း 664 နှင့်တကွ, ဇာတ်စင် PA ဆိုပြီးနှင့်အစိမ်းရောင်အခန်းတစ်ခန်းတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခန်းကိုကျွေးမွေးနိုင်ခဲ့တယ်! "
သွင်းအားစု 664 နှင့် 1 ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက် AES6 သို့မဟုတ် AES3 သွင်းအားစုအဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အပြင်, McCoy မကြာခဏ, အ 42 ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စွမ်းရည်၏အားသာချက်ကြာပါသည်။ "ကျွန်မအနေနဲ့အလွန်အမင်းရေရှည်မှာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ငါနျူမန် KMR 81 D ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် ShotGun မိုက်ခရိုဖုန်းကိုသုံးပါလိုရှိရာအချို့သောအခြေအနေများရှိနေပါသည်။ ငါညာ 664 သို့တစ်ဦး AES cable ကို run ခြင်း, စင်ကြယ်သောဒစ်ဂျစ်တယ် feed ကိုရှိသည်, ဆို RF သို့မဟုတ် EMI ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစရာမလိုဘဲနိုင်တယ်။ "
ထို့အပြင်ခုနှစ်, McCoy လည်းတဦးတည်း XLR အပေါ် AES3ပေးပို့ဖို့သူ့ကိုဖွင့်, အသံဖမ်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ မှစ. အသံဖုန်းများအတွက်'' 664 သူနှစ်ဦးကိုကေဘယ်ကြိုးတွေထိုအသံဖမ်း၏အသီးအသီးအဘို့တယောက်နှင့်အတူနှစ်ဦး MCR3s အပေါ်လမ်းကြောင်းမှထွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နိုင်, AES 42 နဲ့ AES 42 နှစ်ဦးစလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမဆိုအပိုဆောင်း preamps သို့မဟုတ် A-To-D ကို converters အဖြစ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲဖြောင့်ကတ်များဖို့လက်ခံနေတဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးဖန်တီးပေးပါတယ်။
McCoy အတူလုပ်ကိုင်နှာ Sony က ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ AES သွင်းအားစု၏ကင်မရာများ။ ဒါကသူ့ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကင်မရာစတင်ခြင်းဘို့တ cable ကို run ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျအတွက်တဦးတည်း XLR plugging နှင့်ကင်မရာဌာန '' ဝမ်းနည်းပါတယ်, သင်တစ်ဦးလက်ဝဲနှင့်လက်ယာလိုအပ်ပါတယ် '' သူကပြုံးနှင့်တကယ်တော့ '' ဟုပြောသည်အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့င်ဟုသောအခါ "သင်သည်ငါ၏အနေဖြင့်တစ်ဦးစတီရီယို feed ကိုရတဲ့နေ အသံဖုန်းများအတွက်။ ' "
McCoy နှစ်ခုနေ့အခြိနျသူဟာ Emmy လက်ခံရရှိခဲ့သည်® ယင်းအပေါ်သူ၏အလုပ်အတွက် "တိပ်ဖို့အကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက်အသံရောသမ" အတွက်ဆုပေးပွဲ Ellen ဖြစ်သည်ဟုသမ္မတကတော်ပြရန် ကာဂရမ်မီ® ဘရိုင်ယန် Wilson '' ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ကိုယ်တော်စီမံကိနျးအတှကျ "အကောင်းဆုံး Engineering အယ်လ်ဘမ်" အတွက်ဆုချီးမြှင့်အမည်စာရင်းတင်သွင်း။ အစောပိုင်း 2008 ခုနှစ်, McCoy အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံအသံ Society က join ဖို့အငယ်ဆုံးအင်္ဂါတခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါ 664 mic- သို့မဟုတ်လိုင်း-Level အချက်ပြမှုများကိုလက်ခံနဲ့ Analog အထွတ်အထိပ် Limited, High-pass filter များ, input ကိုတိထိန်းချုပ်မှုသည် channel မှာတိုက်ရိုက်အကျိုးရလဒ်များပါဝင်သည်ကိုခြောက်လ Ultra-Low-ဆူညံသံ, High-ပြောင်းလဲနေသော-range ကို, Transformer-လျော့နည်း preamps ပါရှိပါတယ်။ input ကို channel များကို 1-6 များအတွက်တိုက်ရိုက်အကျိုးရလဒ်များ6သွင်းအားစု၏စုစုပေါင်း7လိုင်းသွင်းအားစု (12-12) မှ switched နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ 664 SD နှင့် / သို့မဟုတ် CompactFlash ကတ်များမှ 16- သို့မဟုတ် 16-bit မှာထုတ်လွှင့်နဲ့ WAV ဖိုင်တွေ 24 ပုဒ်အထိမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အားလုံးသွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များ 12 ISO နှငျ့လေးရောနှောပုဒ်အထိမှတ်တမ်းတင်ဖို့ရောနှောဖွင့်, အသံဖမ်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကို select ဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏ dual-ကဒ် slot နှစ်ခုနှင့်တကွ, 664 တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်ဉာဏ်ကဒ်ကွဲပြားခြားနားသောပုဒ် assign ဖို့ကဆက်ပြောသည်စွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်စေသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးကတ်များမှ WAV သို့မဟုတ် MP3 အကြောင်းအရာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဒီဇိုင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, သတင်း-စုဝေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်တယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်၏အမှတ်တံဆိပ် အသံဖုန်းများအတွက် သူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ, မစ်ရှင်-အရေးပါစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစား, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်များ, နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်မျိုးစုံ-Source ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအတွက်။
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်းများနှင့် Madison, Wisconsin ပြည်နယ်အတွက်အပိုဆောင်းရုံးများနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်ရုံးချုပ်ကနေနှစ်ဦးစလုံးအမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်တယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
664 ထုတ်လုပ်မှုရောနှော audio အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု routing အသံဖုန်းများအတွက် 2015-01-28
ယခင်: Post ကို, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာများအတွက် EditShare သင်္ဘော Geevs7ဗီဒီယိုဆာဗာ
နောက်တစ်ခု: Dalet "Dalet အကယ်ဒမီ", နယူးအခမဲ့ပညာရေးပလက်ဖောင်းလွှတ်တင်